कति प्रिय हुन्छ आफ्नो जन्मथलो | कति प्रिय हुन्छ आफ्नो जन्मथलो – हिपमत
कति प्रिय हुन्छ आफ्नो जन्मथलो
साइबेरियादेखि कोसी टप्पुमा आएर आफ्ना बचरा हुर्काएर पुनः साइबेरिया फर्कने चराको आफ्नो जन्मस्थानप्रति कति मोह हुँदो रहेछ भन्ने कुराले मेरो मनलाई नराम्रोसँग छोइदिन्छ । म कल्पना गर्छु कि कति टाढादेखि तिनीहरू आए । कति दिनसम्म नचिनेको ठाउँमा बास बस्नुप¥यो होला । सायद दिनभरि आकाशमा पखेटा चलाइरहँदा उनीहरूको शरीर कति दुख्यो होला । एकदिनको यात्रा मात्र होइन उनीहरूको । सायद महिनौं दिन लाग्यो होला उनीहरूलाई । बाँच्नका लागि आहाराको पनि व्यवस्था गर्नु थियो उनीहरूलाई । कति धेरै जोखिम मोल्नु थियो उनीहरूले । त्यसैले आफूहरू सुरक्षित हुन हुलका हुल भएर लामो यात्रा गर्ने यी चराको बथानले हामी मानवीय संवेदनशील भएका मान्छेलाई धेरै पाठ दिएका छन् । उनीहरूले दिएका पाठलाई हामीले मनन गर्न सकेको खण्डमा निश्चय नै हामी मान्छेको रूपमा चिनिनेछौं ।
माथिको प्रकरणले धेरैको मन छोएको हुन सक्छ । कर्म गर्न जहाँतहीँ भांैतारिएर फिरंगी भए पनि आखिरमा जाने भनेको त आफ्नै जन्मथलो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ । कोशी टप्पुमै उनीहरूको आहार बिहार गरेर बस्न सक्ने भए पनि उनीहरूलाई आफू जन्मिएको, हुर्किएको, खेलेको ठाउँले कसरी आकर्षण गर्दोरहेछ भन्ने कुरा पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । साँझ परेपछि जसरी पशुपक्षी आफ्नो वासस्थानतिर फर्किएका हुन्छन् त्यसैगरी यी चरा पनि सात समुद्र पारिको आफ्नो वासस्थान सम्झेर घर फर्किएका घटना हाम्राका लागि निकै राम्रो पाठ हुन सक्छ ।
यी चराले धेरै टाढा आएर बचरा जन्माएर हुर्काउँदा रहेछन् र जब उनीहरू आकाशमा उड्न सक्षम हुन्छन् अनि उनीहरूलाई आफ्नै जन्मथलोतिर फर्काइँदो रहेछ । जस्तो दुःख कष्ट भए पनि आफ्नै जन्मथलो प्राणभन्दा पनि प्रिय हुँदो रहेछ । त्यसैले ढाड भाँचिएकी कुकुर्नी घिस्रिघिस्रि आफ्नो बासस्थानतिर गएकी हुन्छे । साँझ परेपछि बस्तुभाउ आफ्ना गोठ सम्झेर धाएका हुन्छन् । चराचुरुंगी चिरबिर चिरबिर गरेर आफ्ना बचेरा बोलाउँदै आ–आफ्ना गुँडतिर गइरहेका हुन्छन् । किरा फट्यांग्रा पनि आफू बस्ने सुरक्षित ठाउँतिर लागेकै हुन्छन् । सम्झिँदै जाँदा कति संवेदनशील र ज्ञानबर्धक विषय रहेछ यो जन्मथलो ।
विभिन्न कारणले हामीमध्ये कति जना बिदेसिएका पनि हांैला । जे भए पनि कुनै न कुनै बेला आफू जन्मिएको घर सम्झिएकै हुन्छौँ । दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडबाडमा मौका मिलेसम्म जन्मथलो टेक्न मन लागेकै हुन्छ । आफ्नै देशभित्र र विदेशबाट जन्मथलो सम्झेर थोत्रो ट्यांका र थोत्रा लत्ताकपडा बोकेर रमाउँदै रमाउँदै घर फर्किएकै हुन्छौं हामी सबै ।
जन्मथलोको यति माया हुँदोरहेछ कि कुनै न कुनै बेला ऊ आफ्नो घर फर्किएकै हुन्छ । युवा जोस छउन्जेल फर्किने त्यति बिचार नगरे पनि बुढेसकालमा जब उसलाई सम्झना आइदिन्छ अनि उसलाई के गरुँ, कहाँ जाऊँ भन्ने विचारले उसको मथिंगल रिंगाइरहेको हुन्छ । सधँै मथिंगल रिंगाएर कति बस्न सक्छ उसले । अनि बुढेसकालमा भए पनि आफ्नो सास बिसाउन आफ्नै जन्मथलोतिर पाइतला फर्काउँछ उसले ।
धेरै वर्ष भारतमा बिताएर घर फर्किएका एक वृद्धाको भनाइ अझैसम्म पनि मलाई याद आइरहेको छ । अपरिचित मान्छेलाई देख्दा उनीबारे मलाई जिज्ञासा लाग्यो र सोधपुछ गरेँ । उनी केटाकेटी अवस्थामै भारत पसेका रहेछन् । आसामतिर गोठालो भएर दिनचर्या बिताएका रहेछन् । जब उनको उमेर पाको हुँदै गयो र सायद शरीर पनि कमजोर हुँदै गयो । अनि उनले आफ्नो घर सम्झन थाले । आफ्ना बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, इष्टमित्र, साथीभाइ र आफ्नो जन्मथलोको सम्झनाले उनको मन चटक्क खाएछ । मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै गर्दा रातभरि निद्रा नलागेर छटपटी भएछ । यसरी चिन्ता लिएर बस्नुभन्दा बरु आफ्नै घर फर्कन बेस लागेछ र घर फर्किएछन् । यहाँ जोड्न खोजेको विषय भनेको यति मात्र हो कि मानिसका लागि आफ्नो जन्मथलो र आफन्तभन्दा ठूलो केही रहेनछ भन्ने मात्र हो ।
यो पंक्तिकारलाई माथि उल्लेख गरिएको विषयले निरन्तर रूपमा चस्स चस्स मुटु छुने काम गरेको हुनाले नै यो विषय उठान गरेको हो । विषय साधारणजस्तो लाग्ने भए पनि कसरी मानिसलाई आफ्नो जन्मथलोको माया हुँदोरहेछ भन्न मात्र खोजिएको हो । यस्ता अनगिन्ती प्रतिनिधिमूलक घटना हामीले देखिआएकै छौँ ।
यस्तै घटनासँग जीवन गाँसिएको छ कृष्णबहादुरको । बाल्यकालदेखि नै ऊ विदेशतिर बरालिएको हुन्छ । आफ्नो देशमा दुःख पाएको कृष्णबहादुरले बिरानो मुलुकमा गएर कसरी सुख पाउँथ्यो र ! एक ठाउँमा दुःख पाएको मानिसले अर्को ठाउँमा पनि जीवनयापन गर्न उसलाई त्यति सहज हुँदैन । नयाँ ठाउँ, अपरिचित मान्छे, सबै कुरा नयाँ हुनाले उसलाई जीवन धान्न कठिन नै थियो । आफ्नो जन्मथलोजस्तो कहाँ हुन्थ्यो र उसलाई । जिउनका लागि जे पनि गर्नुपथ्र्यो उसले । सहरमा बसेर उसले चौकीदारी गरेन कि कसैको जुठाभाँडा माझेन कि, मालिकका छोरीछोरीको सरसफाइ गरेन कि विद्यालय पु¥याउने/ल्याउने काम गरेन कि मालिकको रासनपानीको धोक्रो बोकेन कि, सबै काम गरेको हुन्थ्यो उसले । ऊ एक किसिमको घरेलु बँधुवा नोकर नै थियो । यसरी धेरै दिन, महिना र वर्ष बिताएको थियो कृष्णबहादुरले बिरानो मुलुकमा ।
नयाँ ठाउँको बसाइ र जीवनयापन मानिसलाई मात्र होइन, कुनै पनि जीवजन्तुलाई सहज हुँदैन । एउटा जंगल बसेको बाघ अर्को जंगलमा जान चाहेको हुँदैन । एक ठाउँको जनावर अर्काे नयाँ थातथलो बनाउन चाहेको हुँदैन । त्यसमा पनि मानिस भनेको एउटा विवेकशील प्राणी भएको हुँदा ऊ त अरूभन्दा माथिल्लो स्तरको विचार र बुद्धि पोख्न सक्ने भइहाल्यो । कृष्णबहादुर धन सम्पत्तिमा गरिब होला तर विवेक र बुद्धिमा गरिब छैन । दुई÷चार अक्षर पढेको र केही बुझेको हुँदा ऊ विवेक लगाउन सक्छ । अरूले जे–जस्तो व्यवहार गरे पनि उसलाई त्यसको चिन्ता पनि छैन । बरु मानिसमा किन विवेक हराउँदै गएको होला भन्नेतिर उसको चिन्तन मनन भइरहेको हुन्छ । मानिसमा पलाउँदै गएको लोभ, लालचा र स्वार्थीपनले आफैँलाई टोक्छ भन्ने किन मान्छेले बुझ्न नसकेको होला भन्ने खुल्दुली उसको मनमा उब्जिरहेको हुन्छ ।
कृष्णबहादुरले जिन्दगीको धेरै समय उसको जन्मथलो भन्दा पर बिताएको छ । तैपनि, उसको मन भने आफ्नै जन्मथलोतिर सधँै दगुरिरहेको छ । उसकै आफ्नै बाध्यताले गर्दा ऊ आफ्नो जन्मथलोतिर आउन सकेको हुँदैन । आओस् पो कसरी । उसको जीवन धान्ने सानोतिनो काम बाहिरै छ । बालबच्चालाई शिक्षा दिनुपरेकै छ । उसले गर्नुपर्ने अन्य व्यावहारिक काम पनि छँदै छन् । त्यसैले यी विभिन्न कुराबाट कृष्णबहादुर आफ्नो जन्मथलो सम्झँदा सम्झँदै पनि ऊ जान सकेको हुँदैन र आफूलाई अभागी सम्झन पुगेको हुन्छ । गाउँघरको सम्झनाले उसलाई सधँै नरमाइलो लागिरहेको हुन्छ । धेरै समय बिरानो मुलुकमा दयनीय अवस्थामा जीवन निर्वाह गर्न कसलाई मन परेको हुन्छ र ! मन नपरे पनि सबैको आ–आफ्नै बाध्यता हुन्छन् । त्यस्तै बाध्यता छ कृष्णबहादुरमा पनि ।
कृष्णबहादुरको आँखामा झलझली आफ्नै गाउँघर, आफ्नै साथीभाइ र आफ्नै आमाबाबु नाचिरहेका हुन्छन् । मानिसलाई एकोहोरो चिन्ताले चितामा पु¥याउँछ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हँुदाहुँदै पनि चिन्ताबाट मुक्त हुन सकेको हुँदैन । उसलाई चिन्ताले चितातर्फ धकेलिरहेको हुन्छ । आफ्नो जन्मथलोमा कहिले पाइलो टेकौँजस्तो लागेको हुन्छ उसलाई । यो धङ्धङीले उसलाई सधैँ सताइरहेको हुन्छ ।
सधैँ कसरी मानिस चिन्तामा बसिरहन सक्छ र ! एक दिन कृष्णबहादुरले अकस्मात् यो नौलो ठाउँ छाडेर आफ्नै गाउँघरतिर जाने निर्णय गरेको हुन्छ । जिन्दगी भनेको आफ्ना लागि हो । यो अपार जिन्दगीलाई सधँै माया गर्नुपर्छ । मलजल गर्नुपर्छ । जिन्दगी रह्यो भने मात्र अरू सबै कुरा पछि लाग्छन् । जिन्दगी नै नभएपछि त सबै कुरा स्वाहा हुने नै भयो । त्यसैले गर्दा कृष्णबहादुरले आफ्नो जन्मथलोतिर पाइला अगाडि बढाउन थाल्यो ।
धेरै वर्षको अन्तरालपछि आफ्नो घर, आँगन, धन्सार, गोठ हेर्न उसलाई निकै आतुर भएको हुन्छ । जति–जति नगिज आउँदै गर्छ, उति–उति उसको मन चञ्चल भइदिन्छ । उसका आफ्ना साथीभाइ र दौंतरी के गर्दै होलान्, स्वदेशमा होलान् कि विदेशमा ! कतिले घरजम गरे होलान्, कतिले पढाइ पूरा गरेर जागिर खाएर विभिन्न जिल्लामा गएका होलान्, कति भने बिरानो देशमा गएर लापत्ता भएका होलान्, कतिले भने जीवन त्यागिसके होलान् । यसता अनगिन्ती कुराले कृष्णबहादुरको मन चयन हुन सकेन । मनका कुरा मनमै रहन पुगे । उसले यी प्रश्नका उत्तर पाउन सकेन । पाओस् पनि कसरी । प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहे ।
साथीभाइ र दौंतरी अनन्तकालसम्म नरहन सक्छन् । परिस्थिति र बाध्यताले उनीहरू विभिन्न ठाउँमा गएका हुन सक्छन् र उनीहरूसँग भेट नहुन पनि सक्छ । कतिपय दौंतरीको मृत्यु पनि भइसक्यो होला । कति रोगका सिकार भइरहेका होलान् । कति अक्क न बक्क भई अचेत अवस्थामा जीवन बिताइरहेका होलान्जस्ता कुरा मनमा खेलाएर कृष्णबहादुर आफ्नो जन्मथलो खोज्दै गइरहेको हुन्छ । तर यी कुरा भन्दा पनि उसको आफ्नै जन्मथलो र घर आँगनको मायाले बढी पिरोलिरहेको हुन्छ । कृष्णबहादुरमा बढी उत्सुकता र जिज्ञासा थपिँदै गएको हुन्छ ।
जब–जब कृष्णबहादुर आफू जन्मिएको र हुर्किएको ठाउँतिर जाँदै गर्छ, अनि उसको मन खिन्न हुँदै जान्छ । जग्गा–जमिनको आकार प्रकार बिग्रिएको देख्छ । घर वरिपरिका बोटबिरुवा हराएका हुन्छन् । नयाँ बिरुवा लगाएका छैनन् । बाटोमा भएका बगैँचा सब मासिएका हुन्छन् । चराचुरुंगीको वासस्थानसमेत निमिट्यान्न पारिएको हुन्छ । जताततै सडक बनाइएका छन् । धुलो लटरम्म भएको हुन्छ । त्यति रमणीय कृष्णबहादुरको गाउँ अहिले देख्दा उजाड लाग्छ उसलाई ।
ऊ पुनः कल्पना गर्दै जान्छ । गाउँको अवस्था यति उराठलाग्दो छ भने ऊ जन्मिएको जन्मथलो कस्तो होला भन्ने कुरामा ऊ बढी चिन्तित हुँदै जान्छ । अहिले उसका मनमा यो कुरो बिझिरहेको छ कि ऊ जन्मिएको पुरानो माटोले बनेको भुइँ घर, घरको अघिल्तिरको ज्यामिरको बोट, डुम्री, काउरा र अन्य घाँसका बोट बिरुवा कस्ता भएका होलान् भन्ने तर्कनाले झन् ऊ भयभीत भएको हुन्छ । कृष्णबहादुर लामो समय बिरानो मुलुकमा बसेको भए पनि ऊ जहिले पनि उसको जन्मथलोको वरिपरिका वस्तुको आकृति उसको दिमागमा बसेको हुनाले नै यी सबैको नालीबेली लगाउन सकिरहेको हुन्छ ।
जब कृष्णबहादुरलाई आफ्ना अतीतका कुराको सम्झना आइरहेको हुन्छ अनि उसले ती सम्झनालाई देखिरहेका यथार्थसँग तुलना गर्न पुगेको हुन्छ । तर, उसले बाल्यकालमा देखेका वस्तुसँग अहिलेका कुरा एकदमै मिल्न गएका हुँदैनन् । पहाडमा धन सम्पत्ति भन्नु नै जग्गा–जमिन हो । ऊ जहाँ जन्मियो, हुर्कियो, दगु¥यो, खेल्यो र जहाँ उसको नामको जग्गा–जमिन थियो, त्यो नै उसको नामबाट अरूकै नाममा भइसकेको रहेछ । त्यो कुरा कृष्णबहादुरलाई थाहै थिएन । आफ्नो नामको जग्गा–जमिन अरूले हडपेर उसको उठिबास भएको हुँदा आज कृष्णबहादुर दिग्दार भएको हुन्छ । आफू जन्मिएको ठाउँ आफ्नो नहुनु र पहिचान नै गुमाउनुपरेको अवस्थाले कृष्णबहादुर झन् दिग्दार हुँदै जान्छ । अहिले उसको आफ्नो जग्गा जमिन मात्र लुटिएको हुँदैन, उसको थातथलो लुटिएको हुन्छ, पहिचान गुमेको हुन्छ, आफ्नो जन्मथलोको माया ममता हरण गरिएको हुन्छ र अन्त्यमा सबै चिज लुटिएर एक निर्वश्त्र पागलको रूपमा कहिल्यै नफर्कने गरी अज्ञात गन्तव्यतिर अगाडि बढेको हुन्छ कृष्णबहादुर ।
शनिबार, जेठ ३१, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
निषेधाज्ञामा आत्महत्या बढ्दै
भर्चुअल मिटिङमा नबोलाउनुस्
बिषाधी परीक्षण नहुनुको कारण
मोरङमा जग्गाको नयाँ मुल्याङ्कन आयो